‘जनयुद्ध’ साक्षी किनाराबाट : बन्दुकको छायाले तर्साउँछ
केशरमणि कटुवाल काठमाडाैं, १ फागुन
जनमिलिसियाको एक जोडी पोसाक घर नजिकै सुकाइएको थियो । स्कुलबाट दौडँदै आएको म खाजा नखाएरै त्यो मिलिसियाको पोसाक सुकाएतिर लम्किएँ । त्यहाँ नपुग्दै पछाडिबाट आवाज आयो, ‘त्यता नजा ।’
यो २०५८ असोजको कुरा हो ।
१ वर्षअघि नै जनयुद्धमा होमिएका काका अम्बरबहादुर कटुवालको आवाज थियो त्यो । म झस्किएँ । घरबाट हिँडेपछि एक पटक पनि भेट नभएका काकालाई आफ्नै अगाडि कम्ब्याट पोसाकमा देख्दा म अचम्ममा परेँ ।
त्यतिबेला उहाँ एक वर्षअघिका काका नभएर पुरानो राज्य व्यवस्थाको समूल नष्ट गर्न हिँडेको एउटा सिपाही अर्थात् ‘कमरेड अनिल’ भएर मेरो अघि उभिनुभएको थियो ।
मलाई पनि त्यो पोसाक लगाएर अहिल्यै हिँडिहालौँ जस्तो भयो । म धेरै कुरा बुझ्ने भएको थिइनँ । मलाई न त जनयुद्ध थाहा थियो, न मुक्ति र परिवर्तनका कुरा नै आउँथे । तर, काकालाई एउटा सिपाही देख्दा मेरो मनमा खै कुन्नि केबाट त्यो उत्साह र शक्ति आयो ।
त्यो रात धेरै कुराकानी भए । उहाँले ‘दुश्मन’लाई नियाल्न दूरबिन बोक्नुभएको थियो । राती भएपछि धीत मर्नेगरी दूरबिनले चन्द्रमा हेरेँ । कहिले नजिक ल्याएर कहिले टाढा बनाएर चन्द्रमा हेरेँ ।
पछि थाहा भयो, उहाँले भन्नुभएको ‘दुश्मन’ तत्कालीन शाही नेपाली सेना रहेछ ।
हँसिया र नाम्लोसँग जीवन बिताउन अभ्यस्त मेरा हातले दूरबिन छोएको त्यो पहिलो पटक थियो । मलाई ठूलै वस्तु पाएको जस्तो अनुभूति भयो । रातभर निद्रा परेन । बिहान सबेरै उठेँ ।
बुबाले ‘बजारतिर गएर चिनी लिएर आइज अनि सेना आएका छन् कि छैनन् बुझ्’ भन्नुभयो ।
म बजार गएँ । चिनी लिएर आउँदै गर्दा पल्लो डाँडामा पुलिसको हुल आयो । त्यसपछि काका र उहाँसँगै आएका एक जना साथी त्यहाँबाट जानुभयो । दिदी माओवादी आन्दोलनमै हुनुहुन्थ्यो । मंसिरमा सङ्कटकाल लाग्यो अनि उहाँहरू आउने बाटोमा सैनिकका बुट बज्रिन थाले ।
त्यो नै मेरो अन्तिम भेट भयो काकासँग । १० माघ २०५८ मा उहाँ पाँचथरको गोपेटारमा सेनासँगको भिडन्तमा ढल्नुभयो, शहीद हुनुभयो । उहाँ कहिल्यै नभेटिने ठाउँमा पुग्नुभयो ।
यसपछि परिवार क्षतविक्षत बन्यो । बुबालाई ‘माओवादीको दाजु’ भनेर सेनाले अचाक्ली दुःख दिन्थे । महिनामा ३–४ पटकसम्म बुबाको वास सशस्त्रको क्याम्पभित्र हुन्थ्यो । त्यसपछि यो क्रम निरन्तर चल्यो ।
अहिले यसो गम्छु– उहाँहरू माओवादी आन्दोलनमा सामेल हुनुका पछि धेरै कारण रहेछन् । सबैभन्दा मुख्य कारण त त्यसबेला कायम दलाल र प्रतिगामी राज्यसत्तालाई फालेर वैज्ञानिक जनवादी सत्ता स्थापना गर्नु रहेछ । सामाजिक, लैङ्गिक, वर्गीय र राजनीतिक समानता स्थापना गर्नु रहेछ ।
त्यतिबेलासम्म म विद्यार्थी सङ्गठनमा आवद्ध भइसकेको थिएँ । त्यहीँबाट सुरु भयो, यो महासमरको यात्रा । माओवादी आन्दोलन अनेक आरोह अवरोह पार गर्दै अघि बढ्दा उपलब्धिभन्दा क्षति बढी हुन थालिसकेको थियो ।
तत्कालीन सत्ताको सङ्कट त्योभन्दा गहिरो बन्दै थियो । तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र ७ राजनीतिक दलबीचको १२ बुँदे सहमतिको जगमा २४ चैत २०६२ देखि ११ वैशाख २०६३ सम्म भएको १९ दिने जनआन्दोलनपछि माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण ग र्‍यो ।
त्यहाँबाट छुट्यो जनवादी गणतन्त्रको यात्रा अनि लागियो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटोतिर । विद्यार्थी आन्दोलनलाई छाडेर मैले पत्रकारिताको बाटो रोजेँ ।
तत्कालीन नेकपा (माओवादी)को मागअनुसार संविधानसभाको निर्वाचन भयो र माओवादी देशकै सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेर सिंहदरबारभित्र पस्यो । माओवादी सरकारको नेतृत्व गर्ने स्थानमा पुग्यो, माथिल्लो स्तरका नेताहरूको जीवनशैली फेरियो तर युद्धको आर्तनादलाई वास्तविकतामा भोगेका कयौँ नेता, कार्यकर्ता अझै शरीरमा गोली, बम र बारुद बोकेर बाँच्न विवश छन्, कति खाडीमा पसिना बगाइरहेका छन् ।
धेरै योद्धाहरू ‘जनयुद्ध’ले चिथोरेको शरीर बोकेर सत्तामा चलिरहेको व्रह्मलुटलाई मूकदर्शक बनेर हेर्न बाध्य छन् ।
दलाल र प्रतिगामी राज्यसत्तालाई परिवर्तन गर्न बन्दुकको सिरानी लगाएका कतिपयलाई त्यही सत्ताले बदलिदिएको छ । उनीहरू पनि सत्ताको सङ्गीतमा मन्त्रमुग्ध छन् । शहीद, घाइते, बेपत्ता भएका र उनीहरूका परिवारका आवाज सुन्ने फुर्सद अझै मिलेको छैन सत्तासीन अर्थात् हिजोका क्रान्तिकारी उनै विद्रोहीहरूलाई ।
शान्ति प्रक्रियामा सामेल भएपछि माओवादी पार्टीको रणनीति र कार्यनीतिलाई लिएर मतान्तर भयो । यो म र मेरो परिवार जस्तै हजारौँ योद्धाका रगत, पसिना र आँसुको सम्मिश्रण भएको पार्टी हो । यसका नेताको प्रत्येक हाँसोमा मेरा जस्तै हजारौँ परिवारका आँसुका ढिक्का मिसिएका छन् ।
यही पार्टी २०६९ सालमा मोहन वैद्यको नेतृत्वमा फुट्यो । २०७१ सालमा विप्लवको नेतृत्वमा चोइटियो । २०७२ सालमा बाबुराम भट्टराईले एउटा टुक्रो लिएर हिँडे । २०७५ सालमा यही जनयुद्धलाई नेतृत्व गरेका प्रचण्डले माओवादी आन्दोलनलाई एमालेमा लगेर मिसाए । यतिबेला हजारौँ शहीद, घाइते, अपाङ्ग र बेपत्ताका आँसुका ढिक्का पानी बनेका छन् ।
जुन सपना देखाएर उनीहरूले युद्धको शंखघोष गरेका थिए, तिनै सपनालाई कुल्चिएर जनता र कार्यकर्तालाई सडकमै छाडेर नेताहरू वैभवको जीवनतिर फर्किएका छन् । सुकुम्वासीले खान पाउनुपर्छ, युवाले शिक्षा र रोजगारी पाउनुपर्छ, हरेक नागरिकले स्वाभिमानपूर्वक जीवन बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा नारामै सीमित भएको छ ।
२०५२ सालदेखि सुरु भएको जनयुद्धका क्रममा देशको अधिकांश भूभागमा आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गरिए । समानान्तर सरकारको अभ्यास भयो । माओवादीको जनसरकारका प्रमुख डा. बाबुराम भट्टराई शान्ति प्रक्रियापछि एक पटक र युद्धकै नेतृत्व गरेका प्रचण्ड २ पटक प्रधानमन्त्री भइसक्दा पनि कतिपय नेता, कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा ज्यूँका त्यूँ छन् । सत्य निरूपण र मेलमिलापको काम भद्रगोल छ ।
कहिलेकाहीँ प्रष्ट रूपमा बुझेको कुरा पनि प्रष्ट नहुने रहेछ । शान्ति प्रक्रियाको सुरुवात, यसपछिका हरेक परिघटना र माओवादी नेतृत्वमा देखिएका विचलनले उनीहरू आफ्ना राजनीतिक एजेन्डा, आन्दोलन र यसको गन्तव्यप्रति नै प्रष्ट थिएनन् भन्ने देखिन्छ ।
बाहिरबाट हेर्दा गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक तथा समावेसी जस्ता विषयलाई उपलब्धि मानिन्छ । तर, यिनीहरूको प्रगतिशील चरित्रलाई विश्लेषण गर्ने हो भने कम्युनिस्ट दर्शन, आदर्श र सिद्धान्तसँग साइनो देखिँदैन ।
यी केवल प्रचारका साधन बनेका छन् । जनताले सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाइएको छैन धनी र गरिबबीचको खाडल झनै गहिरो बनेको छ ।
युवाले २ छाक खान र एकसरो लाउन, परिवारका सदस्यका नाङ्गो आङ ढाक्नका लागि विदेशिनुपर्ने र कतिपय त बाकसमा फर्किएर आउने अवस्था हाम्रा सामु छ । परिवार टुटेको छ, साथ छुटेको छ ।
अर्थतन्त्र अर्धमुर्छित अवस्थामा छ । तिनै युवा बेचिएर ल्याएको विप्रेषणले मुलुक धानिएको छ । महँगी, भ्रष्टाचार र कालोबजारीले जनता आक्रान्त बनिरहेकै छन् । यो गणतन्त्रात्मक व्यवस्था हिजोको पञ्चायत र राजतन्त्रजति पनि प्रगतिशील चरित्रको देखिन सकेकै छैन ।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा फर्किने कार्यनीति लिएको चुनवाङ बैठकमा तत्कालीन सुप्रिमो प्रचण्डले तत्काललाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यदिशा लिने, त्यसलाई कार्यनीतिका रूपमा बुझ्ने, संसदवादीसँग मिलेर गणतन्त्र ल्याएपछि उनीहरू त्यसलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा बदल्न खोज्छन् । आफूहरूले त्यतिबेलै विद्रोहमार्फत् जनवादी गणतन्त्रतर्फ अघि बढाउने कुरा ल्याए । बाहिरबाट हेर्दा यो सुन्दर सपना रहेछ भन्ने अहिले लाग्छ ।
तर, शान्ति प्रक्रिया प्रचण्डको कार्यनीति नभएर रणनीति थियो र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै प्रचण्डको गन्तव्य थियो भन्ने कुरा कार्यकर्ताले बुझ्दा माओवादी आन्दोलन ‘टाइटानिक’ फिल्मको पानीजहाज जस्तै भइसकेको थियो । हतियार थन्किएर खिया लागिसकेका थिए ।
जनमुक्ति सेना सरकारलाई बुझाएपछि पार्टीलाई जुन बाटो ढल्काए पनि त्यसको प्रतिरोध गर्ने शक्ति समाप्त भयो । युद्धको भयानक परिदृश्य सेलायो, जनयुद्धमा देखाएका ‘मुक्ति’का सपनाबाट ब्युझिँदा युद्धको ‘भूत’ मात्र बाँकी रह्यो, वर्तमान शून्य बन्यो र सबैका अघि संसदीय व्यवस्थामा लतारिनु वा पुनः सातु, सरजाम जोड्नबाट सुरु गर्नुपर्ने अवस्था आयो । सपना, योजना र विरासत छुट्यो ।
अर्को कुरा, कम्युनिस्ट पार्टीमा रणनीतिक र व्यावहारिक रूपमा पोख्त र सिद्धान्तनिष्ठ नेताहरूको अभाव रहँदै आयो, भएकाहरूले शहर हुँदै सिंहदरबार छिरेपछि रङ बदल्न थाले । कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता दक्षिणपन्थी पार्टीका नेता कार्यकर्ता जस्तै ‘भुत्ते’ बन्न पुगे ।
आलोचनात्मक चेतना भएका र ‘फेस टु फेस’ वैधानिक रूपमा आन्तरिक र विरोधी शक्तिसँग लड्न सक्ने कार्यकर्ताको उत्पादन करिब करिब बन्ध्याकरण गरेको जस्तो अवस्थामा पुग्यो । कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता भनेका चाकडी, चाप्लुसी, दलाली र नेताको पिछलग्गु बन्ने कुराले वैधता पायो । चेतनशील कार्यकर्ता पाखा लाग्दै गए, सिद्धान्तको ठीक विपरीत व्यवहार बन्न पुग्यो ।
माओवादीले जुन व्यवस्थासहितको राज्यसत्ताको परिकल्पना गरेका थिए, त्यसबारे माओवादीभित्रै भ्रम थियो भन्ने कुरा अहिले आएर प्रष्ट भयो । वास्तवमा ‘जनवादी–जनवादी’ भनेर यतिका वर्षसम्म भनिएको राज्यसत्ता भनेको कस्तो हो ? यसको चरित्र कस्तो हुन्छ ? सामाजिक–आर्थिक अवस्था र त्यो व्यवस्था टिकाउन कसरी मिहिनेत गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन कमजोर सावित भयो ।
सर्वहारा वर्गले राज्यसत्ता जित्नका लागि बुर्जुवा वर्गविरुद्ध धावा बोलेर मात्र हुँदैन, माक्र्सले भनेजस्तै त्यो बुर्जुवा वर्ग समकालीन अवस्थामा बौद्धिक रूपले पनि माथि हुन्छ । त्यस कारण सर्वहारा वर्गले निरन्तर त्यो वर्गमाथि बौद्धिक रूपमा पनि श्रेष्ठता कायम गर्नुपर्छ । यसमा माओवादी चुक्यो र पुरानै शक्तिको वरिपरि चक्कर लगाउन थाल्यो ।
यतिबेला ती सपनाहरूले हल्लाइरहेका छन्, खिया परेका बन्दुकले मथिङ्गल निचोरिने गरी तर्साउँछन् । ऊबेलाका सुन्दर सपनाहरूको लास बोकेर हामी आफ्नै सपनाको मलामी बनिरहेका छौँ झैँ लाग्छ ।
अहिले आन्दोलनको किनारामा बसेर सोचिरहेको छु, ‘जनयुद्ध’का निम्ति ज्यान दिएका शहीदहरू हाम्रा सामु भए हामीले कसरी मुख देखाउँथ्यौँ होला ! अनि हाम्रा ती विगतका ‘आदर्श’ नेताले उनीहरूलाई के जवाफ दिन्थे होला ?
प्रकाशित मिति: बिहीबार, १ फागुन २०७६, ०९:२४:००
महिलाका लेगिन्स र अण्डरवयर बनाएरै अर्बपति
धार्मिक कट्टरपन्थीको सनकले जन्माएको धर्मकथा
भ्लादिमिर पुटिनको सदावहार सत्ता रहस्य